Ny SSD vaovao T3 azo entina an'ny Samsung dia ampidirina | Avy amin'ny mac aho
Ny fiambenana Apple an'ny zazalahy Cupertino dia manana kojakoja fampiasa amin'ny antoko fahatelo maro ary kojakoja manokana an'ny Apple ho an'ny mpampiasa hamenoana ireo azo itondraina. Fantatr'i Apple izany toy ny fantany ny fivarotana tranga iPhone na kojakoja ary fonony ho an'ny MacBook.
Amin'ity tranga ity dia fatorana vaovao azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny orinasan'ny orinasa izany rehefa nanambara ny fanombohan'ny famantaranandro ao amin'ny Repoblika Tseky y Portiogaly. Toa fehikibo iray mitovy loko no natsipy tsy nahy teo akaikin'ilay maodely vy tsy misy fangarony amin'ny kinova mainty. Azo antoka fa vaovao izany satria amin'izao fotoana izao ny fehy Milely Loop amin'ny Space Gray tsy misy izany ao amin'ny Apple Store.
Ny Apple Watch dia afaka manana an'io loko fehin-kibo vaovao io tsy ho ela. Ny lesoka nametrahana azy tamin'ny fomba sasany dia tsy naharitra tamin'ny fanitsiana rehefa Nanova ny sarin'ny famantaranandro i Apple, saingy ny mpampiasa sasany dia efa nisambotra ilay sary navelantsika teo ambonin'ireto tsipika ireto ihany.
Miharihary fa ny kojakoja ho an'ny Apple Watch dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo kintana tamin'ity Krismasy ity, fa koa ny sisa amin'ny vokatra marika. Azontsika antoka fa tsy ho ela ny Apple dia manana ao anaty katalaoginy misy tadiny, ity loko Milanese Loop in Space Gray ity izay amidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Akaiky ny Loopie Milanese in Space Gray ho an'ny Apple Watch